Maxaad Sameyn Kartaa Marka Dhibaatadaada Dhibaatada Dhameystirto
Guji, Qaadashada, iyo Qalabka Sighaling Maqnaansho Lahaa Dhibaato Dhiman
Dhibaatooyinka adag ayaa badanaaba ah kuwo iska aamusnaan ah, laakiin qaarkood waxay sameeyaan codka ciriiriga ah marka la gelayo ama la damiyo - tani caadi ahaan waa caadi.
Dhinaca kale, haddii aad bilawdo dhawaaqyo maqal oo keliya mararka qaarkood ama dhawaaqyo aanad hore u maqlin - sida gujinta, jajabinta, qalqalaha, ama dilaacinta - dariiqaaga adag ayaa laga yaabaa inuu guuldareysto. In ka badan dhibanaha waa qaar ka mid ah dhawaaqyada tijaabada ah ee guuldarooyinka adag ee laga yaabo inay u egtahay waxa aad maqlaysid.
Tallaabooyinka hoos ku qoran ayaa kaa caawin doona inaad ogaatid in dhab ahaantii ay tahay khadadka adag ee ku jira qaladka iyo haddii ay tahay, waxa la samaynayo xiga ka hor intaan dhamaan xogtaada qaaliga ah aad u fiican tahay.
Waqtiga Loo Baahan Yahay: Dhibaatadani waa inay meel kasta ka socotaa 15 daqiiqo illaa dhowr saacadood, taas oo ku xidhan sababta keentay buuqa wadnaha.
Waxa ugu horeeya ee aad sameyneyso waa inaad hubisaa in darawalada adag ay yihiin ilaha dhabta ah ee dhawaaqa iyo ma aha qayb ka mid ah qalabka kale ee hardware . Fiiri qaybta hoose ee hoose ee loo yaqaan " Calls Other" ka ah Kombuyuutar ayaa ka dhigi kara wax intaas ka badan.
Tusaale ahaan, haddii aad furtid fiilooyinka iyo fiilooyinka xogta laga soo qaado dariiqa adag, laakiin weli waad maqashaa buuqda marka aad computer-ka kicinayso, waxaa cad in arrintu aanay ahayn midka adag.
Dhinaca kale, waxaa muhiim ah in la tijaabiyo sawir kasta si dhab ah u qeexo ilaha. Haddii sanqadhu socoto marka fiilada korontada ku xiran tahay laakiin aad ku soo noqotid marka aad ku dhejisid fiilooyinka xogta si adag, ka dibna waxaad ubaahantahay inaad bedesho xogta xogta.
Xusuusin: Eeg tusaaleyaal ku saabsan Sida loo furo Case Computer Computer haddii aadan hubin sida loo galo kombuyutarkaaga.
Haddii aad hubaal tahay in darawalka adag laftiisu uu khalad leeyahay, wuxuu ku shaqeynayaa barnaamijka ogeysiis adag oo bilaash ah , oo horay loo heli karo kombiyuutaro badan ama laga heli karo internetka. Nidaamka ogaanshaha nooca horumarsan ayaa sidoo kale laga heli karaa kharashka ka yimaada barnaamijyada horumarinta barnaamijka saddexaad.
Markaad ku shaqeyneysid barnaamijka cilad-bixinta, waxaa ugu wanaagsan in la xiro dhammaan barnaamijyada kale iyo fargal kasta ama qalab kale oo aanad tijaabin si natiijooyinka aan loo dhicin.
Fiiro gaar ah , barnaamijka ogaanshaha nooca cudurka ayaa kaliya calaamad u ah meelaha ay ku adag tahay in ay ku dhacaan "xun" oo ka hortagaya kombiyuutarka inay isticmaalaan mustaqbalka. Xaqiiqdii ma hagaajin doonto qalab adag oo filiqsan.
Haddii wax sax ah oo ay sameeyaan barnaamijka cilad-bixinta ee aan si ku-meel-gaar ah u xallinaynin qaylada dirawalka ah, samee dhameystir buuxa oo nidaamkaaga ah isla markaana si deg deg ah u beddel .
Fiiri qaybta koowaad ee hoose si aad u heshid siyaabo aad ku soo celin karto faylashaada kombiyuutarkaaga.
Haddii software-ka cilad-sheegista ah uu caawiyo hagaajinta gujinta, dhagxaanta ama dhageysiga codadka maskaxda ku hayaan in tani ay tahay xal ku meel gaar ah. Fursadaha waa, darawalada adag ayaa sii wadi doona in ay ku dhacaan illaa inta ay ka gaaban tahay mid aan la isticmaali karin.
Xalka rasmiga ah waa inaad sameysid dhameystir buuxa oo nidaamkaaga ah oo aad bedesho dariiqa adag sida ugu dhakhsaha badan.
Si kastaba ha noqotee, dhacdooyin naadir ah marka darawal adagi uu noqdo mid dhawaaq ah marka aad ka heleyso xog gaar ah oo ku saabsan darawalnimada, waxay noqon kartaa qaybaha khaaska ah ee qaladka ku jira, kuwaas oo qaar ka mid ah software-ka lagu ogaan karo.
Caawinaad Dheeraad ah Dhibaatooyinka Dhibaatada Dhibaatada Hard Drive
Maadaama aysan jirin hab wanaagsan oo lagu dayactirayo darawalnimo adag, ilaalinta macluumaadkaaga adigoo fulinaya dib udajinta caadiga ah waa muhiim. Iyadoo kootada casriga ah, dib-u-helidda fashilka khafiifka ah waa mid fudud sida rakibidda wadida cusub oo dib u soo celinta xogtaada.
Habka ugu fiican ee laguugu soo celin karo xogtaada waxaa ku jira adeegga gurmadka rasmiga ah ee internetka sababta oo ah feylashaada waxaa lagu hayaa "daruurta" iyo wax yar u nugul in lumo ama la burburiyo. Si kastaba ha ahaatee, habka ugu dhakhsaha badan waa in la isticmaalo barnaamijka dib udabeenta bilaashka ah - qaar ka mid ah barnaamijyadani waxay xitaa xoqin karaan feylalka ka imaanaya wadada adag ee ku guul daraysata waxayna ku dhejinayaan darawal adag oo cusub.
Dareemooyinka adag ee gobolka (SSDs) ma laha qaybo kala duwan sida dhaqdhaqaaq dhaqameed dhaqameed, markaa ma maqli doontid mid guul darro ah sida aad adigu awood ugu yeelan karto inaad wadatid darawal adag.
Dareemaha adag ee dibedda ah waxay sameeyaan qeylo-dhaan, oo aan ahayn kuwa gudaha ah. Codadkaan waxaa caadi ahaan la maqlayaa marka baabuurku marka hore ku xiran yahay kombiyuutarka, waxaana badanaa keena arimaha korontada ama cable.
Waxaad isku dayi kartaa qalabka dhawaaqa dibadda adigoo xiraya qalabka korontada si toos ah darbiga iyada oo loo marayo qalab xoog leh, adigoo isticmaalaya cabir USB ah, adigoo isticmaalaya USB 2.0+, ama isku xirida wadada adag ee dusha USB kumbuyuutar halkii hore. Mar walba hubso in dekeddaada USB inay si sax ah u shaqaynayso , sidoo kale, dabcan.
Qalab adag oo adag ayaa abuuraya baahida sare ee qaybaha qalabka si ay uga guuraan mid aan ahayn mid aan kala go 'lahayn. Waxaad isticmaali kartaa barnaamij bilaash ah oo loogu talagalay in lagu kordhiyo noloshaada adag ee adag, hase yeeshee waxaa dhici karta in aysan dhibaatada ka qaban doonin qalabka ugu badan ee adag.
Haddii darawalkaaga adag uu sameynayo buuq, waxaa loola jeedaa inay ku shaqeyso. Si kastaba ha noqotee, waxaa laga yaabaa inaadan awoodin inaad xoqdo nidaamka qalliinka si aad u isticmaasho faylashaada sida caadiga ah.
Eeg Daryeelka Dakhliga Dhibaatada Dareemaha ah? haddii aad ubaahan tahay inaad ka hesho faylashaada mid ka mid ah darawalnimo adag.
Inkasta oo aysan ahayn mid caadi ah, waxaa suurtagal ah in maqalka dhawaaqa adag uu sabab u yahay darawal qalabka qaldan. Eeg sida loo cusbooneysiiyo darawallada ee Windows si loo barto sida loo cusbooneysiiyo darawal wadaha adag.
Qalabka kale ee Kombiyuutarka ayaa sameyn kara
Darawalka adag ma aha qaybta keli ah ee kombiyuutarka. Waxa kale oo aad leedahay awood koronto , fan, qalab dhagxaan , iyo waxyaabo kale oo laga yaabo inay sameyso dhawaaq. Waa muhiim in la garto meesha ay buuqu ka imanayso si aad u fahmi karto waxa loo baahan yahay in la eego.
Tusaale ahaan, haddii kombuyuutarku uu ka shaqeynayo xaddi shaqo oo gaar ah, sida xusuus-dhajinta ciyaaraha fiidiyowga, waa caadi in la maqlo taageeraha si dhakhso ah u socodsiiya qalabka qaboojiyaha. Waxaa laga yaabaa in laga yaabo in ay wax ku dhejiyaan xuubka fanaanka taasoo keenta qaylo qariib ah.
Eeg sida loo sameeyo Farsamo Kombuyuutar ah oo Qumman ama Qaylo-dhaan ah haddii aad u malaynayso ilaha runta ah ee dhawaaqyada qalaad dhab ahaantii waa mid ka mid ah taageerayaasha kombuyuutarkaaga.
Markaad furanayso barnaamij ama daaqad gaar ah oo kombiyuutarkaaga laga yaabo, waxaad maqli kartaa dhawaaqa sii kordhaya oo sii kordhaya - midka fudud in qalad loo sameeyo qaylada adag. Tani waxay macnaheedu tahay in ay jirto maqal ku dhexjirta wadada diskooga ah ee ka soo horjeeda sidii hore oo kale si ay kombuyuutarku u akhristo xogta, taas oo ah mid caadi ah.
Boodhadhka ama dhawaaqyada caadiga ah ee laga hadlaayo ayaa sidoo kale laga yaabaa inay qaldan yihiin dhawaaqyada dareemada adag (cabirka aan si adag ugu xirneyn fiilada kombiyuutarka), sida laga yaabo in qaar ka mid ah codsiyada BIOS ee codka .
Sida loo Xalliyo Dhibaatooyinka ay keentay Windows Updates
Xalinta Bixinta Bakhtiyaa-nasiibka BIOS
Sidee looga hortagaa barnaamijyada ka soo xadidaya diiradda Windows?
Sida loo Xaqiijiyo DVD / BD / CD Drive kaas oo aan furaynin ama furin
Sida loo Dhameeyo Kombiyuutarka Tilmaamay Tilmaame Awooda
Sida loo tijaabiyo kormeerka kombiyuutarka ee aan shaqaynayn
Fahmitaanka P2P File Sharing
Sida loo Nadiifiyo Ku-rakibo Windows 8 ama 8.1
La hadlida dhalinyarada ku saabsan sexting
Sida loola xiriiro Taageerada GMX Mail
Guddiga Isgaadhsiinta Federaalka (FCC)
Isticmaalida Isticmaalaha Bogagga leh Excel
Sidee loo soo galaa Google Calendar ee Muuqaalka
Waa maxay Microsoft Word?
Sidee loo furaa Maareynta Disk
Sida Loo-Caddeysto Nooc kasta oo Nano iPod ah
Xaqiiqooyin waxtar leh oo ku saabsan Nidaamka Domain Name (DNS)
Tilmaameyaal Tallaabo-tallaabo ah oo loogu talagalay CADDHAMKA ... CATCH si ay u la socoto qaladka SQL Server
PyCharm - Ugu Fiican Python Linux Python
Waa Maxay Foomka BAT?
Sidee loo soo rogaa midabada (aka Mode Mode) on iPhone iyo iPad
Mortal Kombat: Armageddon Cheats - Xeerarka Krypt - PS2
Sida loo qaabeynayo Wi-Fi ee DSi
Ma ku filan tahay Badeecadeyga Baaxada leh ee Baaxadda Audio?
Sababaha Lagu Helo Aqoonsiga E-Reader ee Carruurta
Sidee loo Gartaa Guri-Jebinta